कोरोना भ्याक्सिन लगाएपछि शारीरिक सम्बन्ध राख्दा कण्डम अनिवार्य ! – Satyapati
काठमाडौं । कोरोना भाइरस भ्याक्सिन लगाएपछि के गर्ने र नगर्ने भन्नेबारे सामाजिक सञ्जालमा अनेक टिप्पणी हुने गरेका छन् । खोप लिएका व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू सोधिरहेका हुन्छन् । यीमध्ये एक प्रश्न यो पनि हो, कोभिड खोप लगाएपछि यौन सम्पर्क राख्न सुरक्षित छ ?
नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यससम्बन्धी कुनै निर्देशिका जारी त गरेको छैन, तर विशेषज्ञहरूले यसबारे केही सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । पुरुष र महिलाले खोपको दोस्रो मात्रा लगाएपछि यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ निरोधक साधन प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
यस अवधिमा बच्चा जन्माउने योजनालाई रोक्दा नै राम्रो हुने उनीहरूको सुझाव छ । कोलम्बिया एशिया अस्पतालका चिकित्सक दीपक बर्माका अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप लगाएपछि केही दीर्घकालीन साइड इफेक्टहरू देखिन सक्छन् । यद्यपी विवाहित जोडीहरूलाई यौन सम्पर्क गर्नबाट रोक्न सकिँदैन ।
यसकारण यौन सम्पर्क गर्दा सुरक्षित साधन अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । ‘पुरुष र महिलाले खोपको दोस्रो डोज लिएपछि २ देखि ३ हप्तासम्म कन्डम प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छैन कि यो खोपले मान्छेलाई कसरी असर पार्छ, त्यसैले कन्डम प्रयोग गर्नु नै उत्तम र प्रभावकारी हुन्छ ।’